I-Daintree Oceanview Retreat - I-Airbnb
I-Daintree Oceanview Retreat
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Carolyn
Leli khaya elihle leholide lihlala phakathi kwehlathi elinemvula ohlangothini lweCow bay hill elibheke ulwandle. I-balcony enethezekile inikeza ukubukwa okumangalisayo ngendawo yokuphumula yangaphandle, i-barbecue nendawo yokudlela yangaphandle. Ikhaya linamakamelo okulala amane futhi Kulala abantu abayisi-8 ngokunethezeka, i-ensuite ngaphandle kwegumbi lokulala elikhulu, Indawo yokuwasha, i-TV, imidlalo namavidiyo.
Uzungezwe elinye lamahlathi emvula amadala kakhulu emhlabeni anokubukwa kolwandle. Leli khaya lezingodo ngelesimanje futhi linethezekile ngokubukwa okuphumuzayo ukuze kugezwe impilo yedolobha.
Sicela ukhumbule omakhelwane njengoba kunomsindo.
Sicela usithinte noma nini uma udinga okuthile.